हुआवेली मेट Google० गुगल अनुप्रयोगहरू बिना: सबै तपाईंले थाहा पाउनु पर्छ | ग्याजेट समाचार
पछिल्लो बिहिबार Huawei Mate 30 को नयाँ दायरा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, आफ्नो दुई नयाँ फोन संग। राम्रो चश्मा, राम्रो डिजाइन, वा राम्रो क्यामेराको बावजुद, गुगल अनुप्रयोग र गुगल प्ले सेवाहरूको अनुपस्थिति हो के यस मामला मा हेडलाइन्स सबैभन्दा बढी समेटिएको छ, साथ साथै Android को एक खुला स्रोत संस्करण को उपयोग।
नाकाबन्दी कि कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिका बाट पीडित छ यो यस्तो चीज हो जुन Huawei Mate 30 को दायरालाई पूर्ण रूपमा प्रभाव गर्दछ। यस कारणका लागि, फोनहरू Android को खुला स्रोत संस्करण प्रयोग गर्न बाध्य छन्, र Google अनुप्रयोगहरू वा सेवाहरू उपलब्ध छैनन्।
1 कुनै गुगल अनुप्रयोग र गुगल प्ले सेवाहरू छैनन्
2 Huawei मेट 30 सट्टामा के छ?
3 Android खुला स्रोत
4 एक अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा HarmonOS
कुनै गुगल अनुप्रयोग र गुगल प्ले सेवाहरू छैनन्
गुगल अनुप्रयोगहरू फोनमा पूर्वनिर्धारित रूपमा स्थापित हुँदैन, केहि हप्तामा यो अफवाह गरिएको छ। त्यसकारण Google Play Services स्थापना हुने छैन यी मोडेलहरूमा मूल रूपमा यी Huawei मेट .० मा। यसको मतलब फोनमा Google Play, एप्लिकेसन स्टोर, वा अनुप्रयोगहरू जस्तै नक्सा, Gmail वा सहायक पूर्वनिर्धारित रूपमा स्थापना गरिएको छैन। साथै, तिनीहरू पहिले डाउनलोड गर्न सकिँदैन।
यद्यपि हुवावेबाट यो निश्चित गरिएको छ कि उनीहरूको पहुँच सहज हुनेछ, तर यो सम्भव हुने बाटो निर्दिष्ट गरिएको छैन। हुवावे मेट 30० बजारमा Google फोन सेवाहरू नभएको पहिलो फोन हुनेछैन। चिनियाँ ब्रान्डका धेरै मोडेलहरू तिनीहरू बिना नै आइपुग्छन्, मात्र यो स्थितिमा स्थापना जटिल हुनेछ, जबकि चिनियाँ ब्रान्डले बुटलोडर अनलक गर्दछ, त्यसैले यो सम्भव हुनु पर्छ।
त्यसकारण, फोनहरू स्वदेशी रूपमा उनीहरू गइरहेका छैनन्। यस दायरामा फोन खोल्नु अन्य एन्ड्रोइड मोडेलहरू जस्तो हुँदैन, किनकि हामीसँग त्यहि अनुप्रयोगहरू हुँदैन वा गुगल खातामा लगईन हुँदैन, जस्तो कि हालसम्म केसमा छ। जे भए पनि कम्पनीले ग्यारेन्टी दिन्छ कि यी हुआवे मेट M० तिनीहरू यूट्यूब, जीमेल वा गुगल नक्सा जस्ता अनुप्रयोगहरूसँग उपयुक्त हुनेछन्। केवल तिनीहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा स्थापित हुनेछैनन् र ती क्षणहरूमा यो ज्ञात छैन विधि जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रदान गरिने छ ताकि तिनीहरूमा उनीहरूको पहुँच छ।
एक पटक अनुप्रयोगहरू स्थापना भएपछि, सबै कुरा फोनमा सामान्य रूपमा काम गर्दछ, हामी प्रयोग गर्यौं। शंका अहिले सम्म छ यो कसरी सम्भव हुने गुगल प्ले सेवाहरू वा गुगल अनुप्रयोगहरू छन् यी मध्ये कुनै एकमा। यो त्यस्तो चीज हो जुन हालमा काम गरिरहेको छ, किनकि तिनीहरूले निर्माणकर्ता आफैंले भनेका छन, त्यसैले केही हप्तामा यस सम्बन्धमा अझ बढी स्पष्टता हुनुपर्दछ।
Huawei मेट 30 सट्टामा के छ?
गुगल प्ले सेवाहरूको अभाव र गुगल अनुप्रयोगहरूको आफ्नै सेवाहरूसँग पूरक हुन्छ। कम्पनीले हामीलाई HSM (Huawei मोबाइल सेवाहरू) को साथ छोड्छ दुबै फोनहरूमा, यसको आफ्नै अनुप्रयोग स्टोर हुनुको साथ, अनुप्रयोग ग्यालरी। यसमा अनुप्रयोगहरूको स applications्ख्या विस्तार गर्न फर्मले एउटा महत्वपूर्ण लगानी गरिरहेको छ, हाल ११,००० भन्दा बढी, ताकि यी Huawei मेट have० भएका प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूसँग पहुँच गर्न सक्नेछन्।
थप रूपमा, हस्ताक्षर गरेदेखि यो HSM पुष्टि भयो तपाईंको आफ्नै GSM, GPS र नक्साको परिचय समावेश गर्दछ। त्यसैले एन्ड्रोइड फोनमा आवश्यक सेवाहरू यी मोडेलहरूमा अभाव हुने छैन। सम्भवतः, फर्मले यसको आफ्नै नक्शा प्रयोग गर्ने छ, जुन उनीहरूले घोषणा गरिसकेका छन् कि ती विकास गरिरहेका थिए र अक्टुबरमा आधिकारिक हुनेछन्। गुगल नक्शाको एक प्रकार, तर कम्पनीबाट नै।
एन्ड्रोइडमा सामान्य अनुप्रयोगहरूका केहि प्रतिस्थापन हुनेछ। यो ब्लकले तपाईंलाई फोनमा गुगल सहायक प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ। त्यसो भए कम्पनी Huawei सहायक संग हामीलाई छोडेको छ, यी हुवावे मेट 30० को लागी आफ्नै सहायक हो, जसले प्राय जसो गुगल सहायकमा हामीलाई थाहा छ धेरै प्रकार्यहरू आपूर्ति गर्दछ। तपाईं फोनमा कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कलहरू, सन्देशहरू पढ्नुहोस्, अनुप्रयोगहरू खोल्नुहोस् वा अन्य बढि। यद्यपि प्रायः यसको सबै कार्यहरू वा प्रकार्यहरू हुँदैनन् जुन गुगल सहायकले हामीलाई सामान्य रूपमा प्रदान गर्दछ।
Android खुला स्रोत
हुवावे मेट 30० मा अन्य ठूलो परिवर्तन एन्ड्रोइड खुला स्रोत को उपयोग हो। अमेरिकाको नाकाबन्दीले उनीहरूलाई अपरेटिंग प्रणालीको खुला स्रोत भागमा सहारा लिन बल गर्दछ, जो कोही यसलाई प्रयोग गर्न चाहान्छन्। जबकि उनीहरूले यसलाई EMUI 10 दिन्छन्, यसको अनुकूलन तह, अनुभव प्राप्त गर्न हामी एन्ड्रोइडमा प्रयोग गर्यौं।
प्रयोगकर्ताहरूले यस अवस्थामा अद्यावधिकहरूको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन, Android खुला स्रोतदेखि, यसको संस्करण १० मा, सुरक्षा अपडेटहरू प्राप्त गर्दछ सबै समयमा। त्यसैले फोन धम्कीबाट सुरक्षित हुनेछ। अपरेटि system प्रणालीको भविष्यका संस्करणहरू पनि प्राप्त हुनेछन्, खुला अनुप्रयोग संस्करणमा गुगल अनुप्रयोगहरू बिना।
EMUI १० इन्टरफेस पनि अपडेट हुनेछ, पक्कै अर्को वर्ष EMUI 11 मा सर्दै। यस अर्थमा, त्यहाँ लेयरको अघिल्लो संस्करणको तुलनामा धेरै परिवर्तनहरू हुनु हुँदैन।
एक अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा HarmonOS
अगस्टको सुरूमा, हुवावेले आफ्नै अपरेटि system प्रणाली प्रस्तुत गर्‍यो, HarmonOS भनिन्छ। चिनियाँ ब्रान्डले यसलाई धेरै प्रकारका उपकरणहरूमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ, तर मुख्य रूपमा इन्टरनेटको कुराको बीचमा। त्यसोभए यो त्यस्तो कुरा हो जुन हामी टेलिभिजन, स्पिकर र अरू धेरैमा देख्न सक्छौं। टेलिफोनमा यसको प्रयोग अस्वीकार हुँदैन।
जे होस् HarmonOS अझै फोनमा प्रयोग गर्न को लागी तयार छैनत्यसकारण यो हुवावे मेट ate० मा आइपुगेको छैन। चिनियाँ ब्रान्डले भन्छ कि यसको प्राथमिकता एन्ड्रोइड प्रयोग गर्नु हो, तर यो अपरेटि system प्रणालीको प्रयोगलाई पनि ध्यान दिइन्छ। यद्यपि केही मिडियामा यस प्रणाली को उपयोग को बारे मा कुरा छ, संक्रमण को लागी केहि वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले यो केहि चलिरहेको हुन सक्छ, तर यो जे भए पनि आधिकारिक हुन केहि समय लिने छ।
यो अस्वीकार गरिनु हुँदैन कि निकट भविष्यमा यो ब्रान्डको फोनहरूमा यो अपरेटिंग प्रणाली प्रयोग गरेर समाप्त हुन्छ। विशेष गरी यदि संयुक्त राज्य संग सम्बन्ध नकारात्मक रहन्छतर ब्रान्डले आफ्नो फोनमा एन्ड्रोइड प्रयोग गर्न प्रयास गरिरहन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » हुआवेली मेट Google० गुगल अनुप्रयोगहरू बिना: सबै तपाईंले जान्नु आवश्यक छ